Dagaal u dhaxeeya Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab oo ka socda duleedka Garbahaarey – idalenews.com
Dagaal u dhaxeeya Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab oo ka socda duleedka Garbahaarey
Wararka ka imaanaya degmada Garbahaarey ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab uu ka socdo deegaan lagu magacaabo Birta-Dheer oo Garbahaarey u jira ilaa 15-KM.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ay weerar ku qaadeen fariisin Al-Shabaab ku lahaayeen deegaankaas, halkaasoo Saraakiisha dowladda ay sheegeen inay wadada u geli jireen gaadiidka ciidamada.
Sarkaal ka tirsan dowladda ayaa sheegay inay soo bandhigayaan meydadka Al-Shabaab oo ay dagaalka kaga dileen, isla markaana deegaanka gacanta ku hayaan, isagoo xusay in dagaalyahanadii Shabaab ee aaggaas ku sugnaa u firxadeen dhinaca Buurdhuubo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada ay qorsheynayaan inay u dhaqaaqaan dhinaca Buurdhuubo oo ay Al-Shabaab ku sugan yihiin.
Dadka ku nool Garbahaarey ayaa soo sheegayay in hubka iyo rasaasta la is weydaarsanayay dagaalka ay maqlayeen, isla markaana dagaalka uu ahaa mid aad u xoogan.
Xoogaga Al-Shabaab ayaa ku sugan qeybo ka mid ah Gobolka Gedo, iyagoo gacanta ku haya degmooyinka Buurdhuubo iyo Baardheere oo ah labada degmo oo ay kaga sugan yihiin gobolka.
Wasaarada Gaashaandhiga oo sheegtay inuu socdo diyaar garowgii dib lagula wareegi lahaa degmada Xudur
Wafdi Wasiiro iyo Xildhibaano oo gaaray Kismaayo iyo Ra’iisul Wasaaraha oo ku sii jeeda